Mamono ny marikao ve ny media sosialy? | Martech Zone
Somary eo amin'ny fefy aho momba ity infographic ity Marketing amin'ny Prestige. To mamono marika, tena mila manao fahavoazana ianao ary tsy azoko antoka fa tena mamoaka izany ity infographic ity. Na dia mila fomba fijery pessimistic momba ny media sosialy aza dia somary mihoapampana ny famonoana olona. Fomba ahoana ny media sosialy mandratra ny marikao mety ho lohateny mety kokoa.
Lohahevitra niadian-kevitra be ny varotra media sosialy. Tena mendrika ny fotoanao ve izany? Manampy na manimba ny fitaomanao ve izany? Ary iza no tena kendreny: ny mpanjifa vaovao, ny mpanjifa efa misy, ny mpiara-miombon'antoka mety ho olon-kafa, na olon-kafa tanteraka? Valio ireo fanontaniana rehetra ireo amin'ny zava-misy mangatsiaka sy mafy.
Ary koa, ny fandinihana omena dia sombin-javatra ary tsy manisy fiheverana ny fanomanana sy ny loharanon-karena nataon'ireo orinasa tamin'ny paikadin'ny media sosialy. Manantena aho fa nianatra ny lesona azon'izy ireo ny orinasa ary tsy nitsambikina tamin'ny media sosialy fotsiny fa tsy nametraka paikady tsara anatiny (ary koa paikady hifandraisana sy hametrahana andrasana amin'ny mpiasa). Tsy dia misy loatra ny zava-misy fa ho hitantsika ny famonoana ireo marika… fa marika marobe kosa no hitantsika izay iharan'ny fahasimbana tsy ilaina satria tsy niomana izy ireo!
Tags: marikahaino aman-jery sosialy